चाणक्य नीति अनुुसार पुरुषले अरुलाई भुलेर पनि भन्न नहुने यी ४ कुरा, के के हुन् त ? – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /रोचक/चाणक्य नीति अनुुसार पुरुषले अरुलाई भुलेर पनि भन्न नहुने यी ४ कुरा, के के हुन् त ?
काठमाडौँ । चाणक्य राजनीतिका मात्र नभई जीवन दर्शनका पनि ज्ञाता थिए । उनी महान् शिक्षक, गुरु पनि थिए । उनका केही कुरा जो सयौं वर्षपहिले जति सान्दर्भिक थिए, अहिले पनि त्यत्ति नै सान्दर्भिक छन् ।
४. चाणक्यले भनेका छन् : जीवनमा मिलेको अपमानलाई कहिल्यै पनि अरूका सामुन्ने चर्चाको विषय बनाउनु हुँदैन । हुन सक्छ, तपाईं अरूलाई भनेर मनको भावना पोख्न चाहनुहुन्छ तर सुन्ने मानिसले यो कुरा दोस्रो मानिसलाई बतायो भने अपमान झन बढ्न सक्छ । यसकारण अपमानसँग जोडिएका घटना कहिल्यै कसैसँग बताउनु हुँदैन ।